जनमतमाथिको बार्गेनिङ - Naya Patrika
खेमराज निरौला काठमाडौं, २८ पुस | पुष २८, २०७४
नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई परिणामसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचनपश्चात् संघीय नेपालको संविधान कार्यान्वयनतर्फको बाटो सहज हुने विश्वास आमजनतामा थियो । तर, अहिलेको राजनीतिक वातावरण हेर्दा यसको ठीकविपरीत भइरहेको छ । निर्वाचनपछि राजनीतिले जुन ‘कोर्स’ लिनुपर्ने थियो, त्यो नभएर अहिले बुझिनसक्नुको अवस्था देखापरेको छ । कसरी यस्तो अवस्था सिर्जना भयो ? यसको जिम्मेवार कसलाई ठान्ने ? अहिले यही भुमरीमा देश रुमल्लिइरहेको छ । निर्वाचनमा हार व्यहोरेको अहिलेको सत्तासीन दल कांग्रेस नै यो समस्या बढ्नुमा बढी जिम्मेवार देखिएको छ । अझ भनौँ वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अहिलेको अस्तव्यस्तताका प्रमुख जिम्मेवार हुन् भन्ने आमनागरिकको ठम्याइ छ ।
यतिखेर एकातर्फ निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको वाम गठबन्धनले वर्तमान सरकार आफ्नो आयु बढाउने गतिविधिमा लागेको आरोप लगाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री देउवा एक मिनेट पनि सत्तामा बस्ने रहर नभएको रटान लगाइरहेका छन् । कांग्रेसका कतिपय केन्द्रीय नेता भनिरहेका छन्– सत्ता हस्तान्तरण विधि र प्रक्रियाले गर्दा ढिलो भएको हो । तर, यसै जुहारीमा आमनागरिक भने रनभुल्लमा छन् । वर्तमान सरकार सत्तामा रहिरहनु भनेको जनमतको धज्जी उडाउनु हो । जनताले अहिले वामपन्थीको सरकारबाट मुलुकको समृद्धिको सपना साकार भएको हेर्न चाहेका हुन् । तर, विडम्बना निर्वाचन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पेस नगर्नुले विभिन्न शंका–उपशंका उब्जाएको छ । मतपरिणाम ‘होल्ड’ गर्ने आयोगका प्रमुखले अहिले आफूलाई सत्ताको ‘किङमेकर’ ठानेर कानुनको व्याख्या गरिरहेका छन् भने सार्वभौम करोडौँ नेपाली जनताले भने कहिले नयाँ सरकार बन्ला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश समयमै स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ढिलो भयो । यसको दोषजति राष्ट्रपतिमा थोपरेर दलहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न पनि नभएको होइन । यी सबै गल्ती र कमजोरीको सजाय कसले पाउने ? जनताले ? आमजनताको मतमाथि अहिले जसरी खेलबाड भइरहेको छ, यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कुरूप बनाउने प्रपञ्च मात्र हो ।
आफूलाई हरेक राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक ठान्ने कांग्रेसमाथि जसरी अहिले सत्तालिप्साको आरोप लागिरहेको छ, त्यतातिर भने आमकांग्रेसीजनको मथिंगलले किन काम गरिरहेको छैन, योचाहिँ बुझ्न सकिएको छैन । अहिलेको मतपरिणामले कांग्रेसलाई आफ्ना गल्ती–कमजोरी सच्याई विगतमा गर्नै नहुने अक्षम्य गल्तीप्रति माफी माग्दै पुनः जनतासँग साक्षात्कार हुने अपेक्षा आमनागरिकको थियो । तर, कांग्र्रेस त्यसको ठीकविपरीत कुदिरहेको छ । जनमत एकातिर छ, कांग्रेस अर्कैतिर छ । यस्तो अवस्थाको कांग्रेसबाट आमनागरिकले अब के आशा गर्ने ? चुनाव अघि बढिरहँदा देशैभर राजनीतिक दलबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो, लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनका नाममा । अर्कातर्फ विप्लव समूहको निर्वाचन हुन नदिने रणनीतिले गर्दा निर्वाचन हुने हो कि होइन भन्ने सन्देह पनि त्यत्तिकै थियो । यसका बाबजुद पनि जनताको सुन्दर भविष्यको परिकल्पनाले साकार रूप पाउँदै थियो । यसका अलावा अबका दिन अभाव, पीडा, गरिबीबाट मुक्त हुनेछन् भन्ने विश्वास र भरोसा पनि थियो जनतामा । निर्वाचन सार्ने बहानाबाजीमा लागेको भन्ने आरोपबाट प्रधानमन्त्रीसमेत मुक्त हुँदै थिए । यी सम्पूर्ण सन्देहबाट जसरी प्रधानमन्त्री देउवा आज मुक्त भए, तर मतपरिणाम आइसकेपछिको उनको गति र मति हेर्दा लाग्छ, उनलाई अहिले केहीको परवाह छैन ।
लोकतन्त्रमा जित र हार स्वाभाविक हुन्छ । जनताले अनुमान गरिसकेको तर कांग्रेसले सोच्दै नसोचेको मतपरिणामले कांग्रेसलाई रसातलमा पुर्‍याइदियो । स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा हार व्यहोरेको कांग्रेसका लागि एउटै विकल्प बाँकी थियो– राष्ट्रिय सभा । स्थानीय निर्वाचनअघि एउटा पद्धतिमा सहमति गरेको कांग्रेसले मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसलाई विश्लेषण गरेर एकल संक्रमणीयको विवाद झिक्नुले उसको मनसाय स्पष्ट देखिन्थ्यो । जसरी भए पनि राष्ट्रिय सभामा केही सिट सुरक्षित राख्ने दाउमा कांग्रेस थियो । अहिलेको मतपरिणामले कांग्रेसलाई आगामी पाँच वर्षका लागि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा पुर्‍याइदिएको छ । जनताले तय गरिदिएको स्थानमा बसेर सत्ता सञ्चालकलाई खबरदारी गर्नुमै कांग्रेसको भलाइ देखिन्छ । अहिले देशभरका जनताले वामपन्थीको सरकार र कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेको हेर्न चाहेका छन् । जनताको जनादेश पनि यही छ । अनि यो जनादेशलाई सहर्ष स्विकार्ने कि सत्ताको बार्गेनिङ मात्र गरिरहने ? कांग्रेसका केही जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्ति जसरी वाम गठबन्धनबाट प्रचण्डलाई कुनै हालतमा अलग्याउनुपर्छ भन्ने घोर अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्, के यो पचासौँ वर्षको लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टीका लागि सुहाउने विषय हो ?
(निरौला तेह्रथुममा अध्यापनरत छन्)